Amanqaku kaMohsin Ali kwi Martech Zone |
Amanqaku ngu Mohsin ali
UMohsin ngumcebisi kunye nomfundisi-ntsapho entliziyweni. Ubekwishishini iminyaka elishumi, enceda abantu ukuba bafezekise iinjongo zabo ngokuthengisa idijithali. Ayisiyonto nje yokufumana itrafikhi engaphezulu okanye ukuguqula ngcono- imalunga nokuqinisekisa ukuba uyakwazi ukunxibelelana nomyalezo wakho ngokufanelekileyo ukuze abaphulaphuli bakho baqonde into ekufuneka bayenze!
Amanyathelo ama-5 okudala iSicwangciso esiPhumelelayo sokuThengisa isiqulatho
NgoLwesithathu, ngoFebruwari 2, 2022 NgoLwesithathu, ngoFebruwari 2, 2022 Mohsin ali
Ukuthengiswa komxholo yeyona ndlela ikhula ngokukhawuleza kunye neyona ndlela isebenzayo yokuthengisa ishishini lakho, kodwa ukwenza isicwangciso sokuphumelela kunokuba nzima. Uninzi lwabathengisi bomxholo balwa nesicwangciso sabo kuba abanayo inkqubo ecacileyo yokuyidala. Bachitha ixesha kumaqhinga angasebenziyo endaweni yokugxila kubuchule obusebenzayo. Esi sikhokelo sichaza amanyathelo ama-5 owadingayo ukuze wenze isicwangciso sakho sokuthengisa esiphumeleleyo ukuze ukhulise ishishini lakho
Wednesday, February 2, 2022 Wednesday, February 2, 2022